Iprofayile yenkampani-G STAR TRADING LIMITED
G STAR ngumenzi oyingcali kunye nomthengisi of intsimbi yokuyila tin ukupakisha kwaye izisombululo of tin unako oluzenzekelayo koomatshini ukusukela ngo-2010.
Ngokubhekisele kwibhokisi yethu yethini umzi-mveliso, Siyakwazi ukubonelela ngeekhonteyina ezinokusetyenziswa kwiphakheji yokutya, iphakheji yesipho somthendeleko, izithambiso pack, indlu iimveliso kunye nokunye.
Zonke izinto zokuprinta ii-inki zebhokisi yeetini / iitoti, kubandakanya imveliso, ukupakisha kunye nokugcina, ziyahlangabezana neemfuno zokhuseleko lokutya.
Okwangoku, sisenza kwaye sithumele ngaphandle amatyala angezantsi:
Tin ukutya:ilekese tin ibhokisi, itshokholethi tin box, zinti amatyala etoti, ikuki tin box, biscuit tin ibhokisi, ikeyiki yenyanga tin ibhokisi, nut tin ibhokisi, iti tin ibhokisi, itoti yewayini, kofu tin box, isinongo tin, njl
Iphakheji yesipho somnyhadala wesipho: Iinkonkxa zeKrisimesi, iPasika tin amaqanda, amabhakethi e-Ista, uSuku lweValentine iinkonkxa ezimilise okwentliziyo, uSuku looMama tin Ukupakishwa kwesipho kwaye nangokunjalo.
Iphakheji yethini yethambiso: ezahlukeneyo zolusu tin package, iziqholo tin, neeoli ezifunekayo tiniimaski zobuso tin, itoti yokwenza izinto kwaye Ukucoca i-tin, i-ect.
I-tin yasekhaya inokupakisha: i-tin yokonga imali yebhanki, ibhokisi yekhandlela, iipensile zebhokisi, ukudlala imidlalo ye-tin isitya, iithoyi zokugcina itoti yabantwana, izihlangu iibhokisi zepinki njalonjalo.
Ndikunye more ngaphezu kwe-100 iiseti ezahlukeneyo Machining Tin Ukwenza Machines, ejikeleze 10 imigca yemveliso ezenzekelayo, yenza zonke iibhokisi zentsimbi umgangatho ozinzileyo kunye nokuhanjiswa okuqinisekileyo.
Ngaphezulu kweeseti ezili-1,000 zebhokisi ye-tin kunye ne-tin enokubumba ukuhlangabezana neemfuno zemveliso zabathengi zokupakisha ibhokisi yeetini.
Kwitena yethu yensimbi inokwenza oomatshini mveliso, senza kwaye sibonelele ngomgangatho ophezulu wesinyithi esenziwe ngesinyithi sinako oomatshini bomzimba, oomatshini bokwenza ityhubhu esizenzekelayo ngokuzenzekelayo, itoti ebhalwe ngesandla inokufaka umatshini wokutywina, itoti oluzenzekelayo inokufaka umatshini wokutywina, iziqwenga ezi-2 zokwenza umatshini, ezinye izitena ezinxulumene nazo zinokucoca oomatshini kunye neetini zokwenza izixhobo kwaye ziyafa.
yethu imishini baleka kakhulu Zizinzile kubathengi bethu bokuqala izityalo Phantse IMINYAKA YE-10. Thelekisa abo sikhuphisana nabo, siyayazi indlela yokwenza oomatshini beetoti abasebenza ngokukuko nangokufanelekileyo, njengoko iibhokisi zethu zokwenza iti oomatshini beefektri benziwe sithi iinjineli zethu ngaphezu kweminyaka eli-15 tin unako umatshini ingcali imvelaphi, kunjalo confiisifotho sokukunceda usete itoti Mveliso umgca.
G STAR is rhoqo Ngokufutshane ngokukhonza kunye nelisa abathengi, kwaye sijonge phambili ekubeni ngabathengi bethu bonke abathembekileyo kumaqabane ethu.